🥇 ▷ iPhone 5: Barnaamijka badhanka badhanka awooda ayaa imanaya Spain Sidee loo dalbadaa? ✅
iPhone 5: Barnaamijka badhanka badhanka awooda ayaa imanaya Spain Sidee loo dalbadaa?
Laga bilaabo Maajo 2 waxaan bedeli karnaa badhanka awoodda cilladaysan ee iPhone 5 ee Spain
Ka dib markii lagu bilaabay gudaha Maraykanka barnaamijka badalka ee batoonka cilladaysan ee iPhone 5, waxaan arki karnaa in nidaamka oo dhan ee ah inaan raacno hadda waa laga heli karaa Spain si ay u awoodaan inay u qabtaan beddelaadda xorta ah ee badhanka qufulka. of our iPhone 5. Dabcan, in kasta oo aan xaqiijinno in aaladdayadu ay ka tirsan tahay mid ka mid ah kuwa ay dhibaatadu saameysey, ma awoodi doonno inaan ku bilowno hannaanka beddelaadda illaa May 2, markaasoo barnaamijkan uu ka bilaabmayo waddamada intiisa kale.
Kadib waxaan sharraxnaa habka loo beddelo badhanka awoodda cilladaysan ee iPhone 5 bilaashka ah la Apple.
Sida loo beddelo Power ama badhanka qufulka ee iPhone 5 oo leh barnaamijka badalka Apple
Sida ay ku cadeeyeen Apple Boggooda rasmiga ah ee barnaamijka badhanka iPhone 5 Power badalka, waxay go’aamiyeen in habka badhanka imurasilẹ / firfircoonida boqolkiiba boqol ee iPhone 5 lagudajin karo shaqada ama si isdaba joog ah. Waa suuragal in dhibaatadani ay saameyn ku leedahay moodallada iPhone 5 ee la soo saaray bishii Maarso 2013.
Apple waxay bedeli doontaa iyada oo aan wax kharash ah looga qaadaynin badhanka nasashada / firfircoonaanta moodooyinka iPhone 5 Dhibaatadaas waxay leeyihiin lambar sir ah oo sax ah.
Si aad u ogaato haddii iPhone 5 noogu jirto barnaamijkan bedelka ah, si fudud waa inaan galnaa lambarka taxanaha ah ee iPhone 5 ee boggan si aan u ogaano haddii aaladdaadu ay buuxisay shuruudaha barnaamijkan. Haddii ay dhacdo in badhanka Aaladda iPhone 5 ay kuu muujiso wax calaamado ah oo dhibaatooyin ah ama haddii lambarka taxan uusan ka dhex jirin kuwa ka tirsan barnaamijka, uma baahnid inaad sameyso wax hubin ah.
Waayo meel lambarka taxanaha ah ee iPhone 5 waxaan si fudud u aadeynaa: Settings> General> Information> Sial Number.
Waxaan ku xasuusineynaa in habka bedelistu uu ka bilaaban doono Spain laga bilaabo May 2, 2014.
IPhone 5 keydka furaha badhanka habka Apple
Habka badhanka hurdada / dhaqdhaqaaqa waxaa lagu beddelaa xarunta dayactirka ee Apple. Waxaad ku gaarsiin kartaa iPhone shaqsi ahaan xarunta dayactirka ama boostada ugu soo diri kartaa. Faahfaahinta hoos ka eeg. Waxay qaadan kartaa 4-6 maalmood laga bilaabo taariikhda helitaanka iPhone ee xarunta dayactirka illaa aad ka helayso beddelaadda. Waxaan baari doonaa iPhone ka hor intaanan sameynin wax shaqo dayactir ah si aan u aragno inuu buuxiyo shuruudaha barnaamijka iyo haddii, haddii kale, uu si sax ah u shaqeynayo. Kahor intaadan u dirin iPhone-ka Apple dayactir, samee nuqul gurmad ah ee dhammaan xogta oo tirtir dhammaan dejimahaaga iyo waxa ku jira.
Haddii aad iPhone 5 waxyeello ka soo gaartid, sida shaashad dilaacday, oo adkeyneysa in la beddelo badhanka heysashada / dhaqdhaqaaqa, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la xalliyo dhibaatadaas ka hor inta aan badhanka badhanka la gaarin. Xaaladaha qaarkood, dayactirkani wuxuu yeelan karaa qiime dheeraad ah.
Sida loo diro iPhone 5 xarunta dayactirka ee Apple
Waxaa jira laba qaab oo loogu helo iPhone 5-kaaga Apple si ay u beddelaan badhanka qufulka waxyeelloobay, gaarsiinta shaqsiyadeed bakhaarka idman ama boostada ugu diro. Hoos waxaan ku sharaxaynaa sida labada jidba u shaqeeyaan.
U qaado iPhone 5 adeeg bixiyaha ka qaybqaata barnaamijka: dukaan Apple Store ama Adeeg Bixiye Idman Apple.
Waxaan baari doonaa iPhone-ka si aan u xaqiijino u-qalmitaankaaga ka dibna waxaan u diri doonnaa xarunta dayactirka ee Apple maxalliga ah.
Waxaad heli doontaa ogeysiin marka iPhone uu diyaar u yahay aruurinta.
Hadaad ubaahantahay taleefanka amaahda inta iPhoneka lagu hagaajinayo, dukaamada Apple Store ee barnaamijka
Waxaad haysataa iPhone 5 moodal (16 GB oo keliya) marka aad gacantaada ku jirto.
Xusuusin: Xulashada gudbinta shaqsiyadeed waxaa keliya oo laga heli karaa dukaamada Apple Store iyo Bixiyaasha Adeeg Idman ee Apple, mana ahan kuwa ka shaqeeya taleefannada mobilada.
Wac Apple oo aad weydiisataa sanduuqa boosta lacagta lagu bixiyo si loogu diro iPhone xarunta dayactirka ee Apple maxalliga ah.
Waxaan baari doonaa iPhone-kaaga xarunta dayactirka si loo xaqiijiyo u-qalmitaankaaga.
Mar haddii iPhone la hagaajiyo, boostada ayaan kuugu soo celin doonaa.
Diyaarinta iPhone 5 ee dayactirka
Ku kac talaabooyinka soo socda si aad u hubiso in iPhonekaagu uu diyaar u yahay dayactirka:
Samee gurmad xogta xogta ku jirta iTunes ama iCloud.
Dami Raadi iPhone-ka.
Tag Xeerarka> Guud> Dib u Dejinta> Nadiifi waxyaabaha iyo dejinta si meesha looga saaro waxa ku jira iyo dejimaha.
Ka saar guriga ama daboolka.
Waa inaad maskaxda ku haysaa in haddii aad haysatid macruufka 6 ee rakiban, waxaa lagama maarmaan noqon doonta inaad cusbooneysiiso iPhone-kaaga oo leh macruufka 7 ka dib bedelka badhanka hurdada / dhaqdhaqaaqa.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan bedelka badhanka qufulka iPhone 5
Apple waxay xaddidi kartaa dayactirka waddanka lagu iibsaday. Aaladda IPhone 5 ee laga soo iibsaday wadamada xubnaha ka ah EEA ayaa laga yaabaa inay door bidaan adeeg ka socda wadamada kale ee xubnaha ka ah. IPad 5 waa inay si sax ah u shaqeysaa si loogu qalmo barnaamijkan.
Haddii aad u maleynaysid inaad ku bixisay bedelida dhibaatadan darteed, fadlan la xiriir Apple si aad u weydiisato lacag celin.
Barnaamijkan caalamiga ah ee Apple ma kordhinayo caynsanaanta heerka caadiga ah ee iPhone. Barnaamijku wuxuu daboolayaa iPhone ay dhibaatadu saameysey muddo labo sano ah laga bilaabo taariikhda iibinta asalka ah ee qaybta.